Izindaba - Izindaba ze-CCTV zinake futhi zaphenya imaski enikezwe inkampani yethu
Izindaba ze-CCTV zinake futhi zaphenya imaski enikezwe inkampani yethu
Izindaba ze-CCTV zinake futhi zaphenya isimo samamaski ahlinzekwa yinkampani yethu. Sizokwenza konke okusemandleni ethu ukuze sibe negalelo elincane kulesi sifo esiwubhubhane.
Selokhu kwaqubuka inyumoniya eWuhan, inkampani yethu isiqale uhlelo lokuhoxiswa kwesikhashana kwabasebenzi nomsebenzi wokuphuthuma kuMkhosi Wasentwasahlobo kusukela sithole i-oda lesidingo esiphuthumayo.
Izindaba ze-CCTV, izindaba ze-CCTV ezisakazwa bukhoma, isiteshi esiphelele sase-Shanghai, i-Xinhuanet, i-Sina kanye neminye imithombo yezindaba kanye nomagazini nabo beza enkampanini yethu ukuze bathole inhlolokhono kanye nophenyo, futhi bahlale benaka ukunikezwa kwezinto zokuvimbela ubhubhane.
Ngo-7:25 pm ngoJanuwari 27, i-Shanghai Yuanqin Purification Technology Co., Ltd. yaxoxwa nentatheli yezindaba ebukhoma ye-CCTV.
Yenza yonke imizamo yokuhlinzeka ngesidingo semaski amahora angama-24 ngosuku
Iqembu elihamba phambili lokuhlanzwa kwe-Yuanqin linqume ngazwi linye ukukhiqiza Amahora angama-24 ngosuku phakathi noMkhosi Wasentwasahlobo. Umthamo wokukhiqiza ohleliwe wawungu-40000 ngosuku, kodwa manje usunyusiwe waba ngu-50000.Kubikwa ukuthi kusenegebe elikhulu eziqiwini zomaskandi ngenxa yoMkhosi waseNtwasahlobo. Sizokwenza konke okusemandleni ethu ukuze sibe negalelo elincane kulesi sifo esiwubhubhane.
Kuze kube manje, ulayini wokukhiqiza ozenzakalelayo wenkampani ubulokhu usebenza ngokuqhubekayo amahora angama-24, futhi omunye ulayini omude wokukhiqiza oyi-semi-automatic ofakwe eshalofini nawo ujoyine ukukhiqizwa.
Ikhono kanye nezindinganiso eziqinile zokukhiqiza
Njengamanje, kunabakhiqizi abayi-17 bemikhiqizo ehlobene nemaski e-Shanghai, okuhlanganisa cishe aba-4 abanomthamo ojwayelekile wokukhiqiza imaski we-kn95“ "Ukuhlanzwa kwe-Yuanqin" ungomunye wabakhiqizi abakwazi ukukhiqiza imaski ejwayelekile ye-kn95.
Akuyona yonke imboni yemaski engakhiqiza imaski ejwayelekile ye-kn95. Ngeziqu ezifanele kuphela lapho singakwazi ukukhiqiza imaski ye-kn95 ehlangabezana namazinga.
Ukudluliswa kokufudumala kuphiniwe kumaski
Ngenxa yomthamo omkhulu wokukhiqiza, ngaphezu kokudinga ukuthi bonke abasebenzi bokuqala babuyele emsebenzini, izisebenzi zokuphatha nazo zatshala imali emgqeni wokukhiqiza, zaphinde zabiza inani elikhulu lezisebenzi zesikhashana, nabantu abangaphezu kuka-40 abashintshana amahora angu-12.
Abanye abasebenzi babuyele kwelakubo ngemuva kokuthola isaziso sokubuyela efemini. Njengoba besazi isimo esibucayi nesiphuthumayo sobhubhane ezweni, babuyela ngokushesha efemini ngaphambi koMkhosi Wasentwasahlobo futhi bazinikele ekusebenzeni isikhathi esengeziwe.
Isho ukuthini ngempela i-"kn95"?
"Kn" imele imaski yaseShayina ejwayelekile gb2020, "I-95" imele imaski yokuhlunga izinhlayiya ezingama-95% noma ngaphezulu. Imaski inezigaba ezintathu zesakhiwo sangaphakathi, futhi isendlalelo ngasinye sinemisebenzi yokuhlunga ehlukene.